Rugby – «Circuits mondiaux 2020»: hihemotra amin’ny taona 2021 ny tohin’ny lalao | NewsMada
Tsy azo tontosaina amin’ity taona 2020 ity ny tohin’ireo lalao fifanintsanana amin’ny “Circuits mondiaux 2020” taranja rugby. Noho ny valanaretina covid 19 hatrany no anton’izany.
Noho ny tsy mbola fa­hazoana antoka tsara ny amin’ilay valanaretina coronavirus, notapahin’ny federasiona iraisam-pirenena fa hahemotra amin’ny taona 2021 ny tohin’ny fifaninanana “Circuits mondiaux 2020”, taranja rugby lalaovina olona fito, lahy sy vavy. Marihina fa misy firenena 10 ny hanaovana izany, ho an’ny lehilahy raha valo kosa eo amin’ny vehivavy.
Efa nisy ireo tontosa tamin’izany, saingy eo ihany koa ireo tsy tanteraka noho ny fisian’ny covid-19. Ani­san’ireny ny ao Dubai, izay tokony hatao ny 26 sy ny 28 novambra ho avy izao ary ny any Cape Town, Afrika atsimo, ny 4 ka hatramin’ny 6 desambra 2020.
Nisy ny vondrona manokana natsangana handinika ny drafitra amin’ny ho fiverenan’ny fifaninanana ho an’ny taona ho avy. Na izany aza anefa, mbola napetraka ho laharam-pahamehana hatrany ny fahasalaman’ny mpilalao sy ny fahamehana rehetra momba izany. Rehefa nisy ny fifampidinihana tamin’ireo federasiona rehetra sy ny rantsa-mangaikan’ny baolina lavalava maneran-tany, notapahina fa voahosotra ho tompondaka ho an’ity “Circuits mondiaux 2020” ity ny All Blacks, sokajy lahy sy vavy. Izy ireo mantsy no manana isa ambony indrindra tamin’ireo “circuits” efa tontosa. Raha tsiahivina, efa vita ny 6 tamin’ireo 10, teo amin’ny lehilahy, raha 5 amin’ireo 8 kosa ny an’ny vehivavy
Etsy ankilany, manohy ny asany hatrany ny federasiona iraisam-pirenena amin’ny fanomanana ny lalao olympika 2021, tanterahina any Japon. Hatreto mantsy, mbo­la vao firenena 21 amin’ny 24 no nahazo ny tapakila hiatrehana izany. Heverina ho­tontosaina ny volana jona 2021 ireo lalao fifantenana farany, hahalalana ireo ekipa telo farany ho any Japon.